एमालेको महासचिवमा योगेश, माधव पक्षका अरु ३ सांसद पनि ओली क्याममा फिर्ता, को को ? - News20 Media
June 4, 2021 N20LeaveaComment on एमालेको महासचिवमा योगेश, माधव पक्षका अरु ३ सांसद पनि ओली क्याममा फिर्ता, को को ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिका चतुर खेलाडी सावित हुदैँ आएका छन् । राजनीतिक रूपमा अफ्ठ्यारोमा परेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ–नयाँ फण्डा अपनाउँछन् । यस पटक पनि उनले यस्तै तुरुप फालेका छन ।
वरिष्ठ नेता माधब नेपाल पक्षभित्र खेल्न ओलीले पदको तुरुप थापेका छन् । उनले नेपाल पक्षका नेतालाई पार्टी र सरकारमा आकर्षक पद दिने सन्देश पठाइरहेका छन । नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराइ र गोकर्ण बिष्टलाई भविष्यमा महासचिब बनाउने उनको प्रस्ताव छ।
महासचिब एक पद भएपनि राजनीतिका चतुर खेलाडि ओलीले फरक–फरक पात्रमार्फत चारै जनालाई सो पदको आश्वासन दिएका हुन । बहुमत सांसदहरुले अदालतमै गएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश मागेपछि ओली आत्तिएका छन्।
नेपाल पक्षलाई फुटाउनै पर्ने स्थिति रहेकाले सुवाष नेम्वाङ र ईश्वर पोखरेललगायतका नेतालाई ओलीले खटाएका छन । ओलीले योगेश भट्टराईसँग जेलमा संगै बसेको र आफुलाई योगेश पुत्रजस्तो लाग्ने भनेर भाबनात्मक ब्ल्याकमेल गरिरहेको ओली निकट स्रोतले जनाएको छ।
जस्लाई जे भन्दा मन जितिन्छ, त्यही भन्ने शैली ओलीले अपनाएका छन । सुरेन्द्र पाण्डेलाई वरिष्ठ भइकन पनि नेतृत्वमा आउन नसकेको तर आफूले ल्याउने बाचा ओलीले गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यसैगरी, नेता घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्टलाई पनि विहिन्न वहानामा आफुतिर तान्ने ओलीले दुतहरु खटाएको स्रोतले जनाएको छ । एमाले नेपाल समुहका सांसदहरुलाई कारवाही गरेपछि संसदमा ओली पक्ष र विपक्षी दुवै तर्फ वुहमत पुग्ने अवस्था छैन । तर जनता समाजावदी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र समुहसहित नेपाल समुहका ३÷४ जना सांसद आफनो पक्षमा पार्न सके ओलीको वहुमत पुग्ने संभावना रहेकाले उनले मरिहत्ते गरेको जनाईएको छ ।
यसैबीच, यता नेकपा ९एमाले० माधव नेपाल पक्षका १७ भातृ संगठनले पार्टीका सबै संरचनालाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा नफर्काए पार्टी बिसर्जन हुने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनकि गर्दै अहिलेसम्म आफूहरु एकतावद्ध एमालेकै पक्षमा रहेको भन्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
‘हामी चाहन्छौँ, आम नेता तथा कार्यकर्ता चाहन्छन्, एकतावद्ध नेकपा ९एमाले०कै नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढ बनोस्। हामी चाहन्छौँ, नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा होस्। यसका निम्ती पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका साथै संरचनाहरुलाई २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिबाट केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील बनाइयोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि त्यो नगरिए पार्टी र आन्दोलन बिसर्जनको बाटोमा जानसक्छ।’
विज्ञप्तिमा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अवैधानिक कार्य गर्दै आएको भन्दै ती सबै खारेजयोग्य भएको दाबी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा अध्यक्ष ओलीलाई संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिविरुद्ध गरेका निर्णय सच्याउन भनेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान गुम्ने खतरा पैदा भएको छ भने पार्टी विधानविपरीतका एकपछि अर्को गरिएका स्वेच्छाचारी निर्णयले नेकपा ९एमाले० र कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा परेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिविरुद्ध गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू सच्याएर सुदृढ र एकतावद्ध नेकपा ९एमाले० निर्माणको लागि हामी अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्दछौं।’
विज्ञप्तिमा माधव नेपाल पक्षको किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बाँस्कोटा, महिला संघकी अध्यक्ष जयन्ती राई, प्रेस चौतारीका विश्वमणी सुवेदी, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, युवा संघका नरेश शाही, नेपाल ट्रड युनियन महासंघका विष्णु लम्साल, नेपाल उत्पीडित जाति समाजका गणेश विक लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
माधव नेपालले अर्को पार्टी खोल्ने, नाम र चिन्ह यस्तो बनाउने, हेर्नुहोस्
यी पार्टी मिलेर अगाडि बढ्दैः एमालेलाई धक्का, अब के होला हेर्नुहोस् ।